Hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranin.
WQ. Mahamoud Wardere | mwardere@oakwood.com | Dec 23
Maxaa loo cafin waayay Trent Lott waa kii codsadayay?
Sidii uu noo sheegay nabigeena (SCW) “ ninkii ilaahay rumeeyayow wax khayr leh ku hadal ama iska aamus” arrintaas waxay kaa badbaadinaysaa denbi iyo nacayb badan oo kugu dhici lahaa.
United States of America waxay soo martay xaalad xun oo dulmi iyo midab takoor iyo dadka qoqobsan iyo nacayb badan. Inkastoo aanan la dhihi karin maanta waxwalba waa OK haddana waxaan shaki ku jirin inay wax iska bedeleen.
Dadka qaarkiis isbedelka waa la qabsadeen qaarna weli waa la qabsan la’yihiin.
1994kii Senator Conrad- oo ku jira olole doorasho ayaa la kulmay nin caddaan ah kaasoo waydiiyay senator tartamaya. Sidee ugu nooshahay Washington, DC ?.(waa meel madawga ku badan yihiin xaruntii dawladdana ah) waa meel madawgu ku badan yahay? Murashaxii ayaa ku jawaabay “la noolaanshahooda waa cadaab iyo mashaqo”. Markii la maqlay wuu cudurdaartay.
Isla asagoo ka hadlaya baahida maraykanka ee shidaalka 1999 ayuu carabta ugu yeeray madax sajaayadlay (kadiifad ama masalle) asagoo ku jeeda duubka carabta. Markii la maqlay wuu ka cudur daaratay
Murashax kale oo la yiraahdo Saxby oo hadda ah senatorka cusub oo laga soo doortay Georgia ayaa yiri “sida ugu fiican oo loola dagaali karo argagixisada waa in ciidanka ammaanka ee Georgia la fasaxo si ay u xiraan qofkasta oo muslim ah oo ka soo taabsanaya xuduuda Georgia. Markii la maqlay wuu cudurdaartay.
Senator Robert Bernnet- Utah oo ka hadlaayo xilligii madaxwayne Bush uu ku jiray ololaha doorashada ayaa yiri “Bush wuu helayaa taageerada xisbiga jamhuuriga haddii aanay naag madaw keenin wiil wacal ah oo aanay dhihin asagaa iga dhalay” markii la maqlay wuu ka cudur daartay!.
Trent Lott oo ahaa madaxii senateka xisbiga jamhuuriga dalka maraykanka asagoo ka qudbaynaya xaflad lagu maamuusayay Senator 100 sano jirsaday maalintii uu dhashay oo lagu qabtay White houseka ayaa waxa afkiisa ka soo baxay “waan kuu codaynay 1948 haddii dadka kalena ku dooran lahaayeen maanta dhibtaan ma taaleen. Sawaxankii iyo farxaddii xafladda ayaa mar uun istaagtay! waayo dadka waxay yaqaaneen odaga loo faystaynayo inuu ahaa midab kala sooce (racist) oo 1948 markuu cararay lahaa haddii la i doorto madawga meel gooni ah baan ku takoorayaa oo idinma dhax imanayaan
Trent Lott waxay arrintii ku qasabtay inuu jagadii iska casilo oo ceeboobo ka dib markii laga dhagaysan waayay raaligelintii iyo maslaxadii. Labada qodob oo ku qasabtay inuu is casilo waa isagoo rikoor xun oo badan laga helay iyo xisbigiisa oo ka baqay inay waayaan codka dadka gaar ahaan dadka madaw..
1993 Senator Ernest Hoolings-SC oo ka qayb gelaya shir ganacsi oo lagu qabtay Switzerland asagoo ka hadlaya madaxda Africanka “ Intay is cuni lahaayeen halkan ha yimaadeen waayo waxay helayaan qado fiican”. Markii la maqlay wuu cudur daaratay.
1999 Mudane ka tirsanaa baarlamaanka MN oo ka qaygelayay Aas sharfeed (duug) nin aan tol iyo ehel duugo lahayn (Homeless) oo Afican American ah oo ay tacsidiisa ka soo qayb galeen dadwayne bani’aadamka qadarintiisa jecel ayuu ka yiri “ Annagu haddaannu dunida hore u martay nahay sida Afrikaanka dadka ma xasuuqno ee waan qadarinaa oo waan sharafnaa xattaa haddii uusan ehel lahayn”.
Ninkan tacsidiisa iyo inuusan haysanin dad waxaa lagu aclaamiyay wargaysyada magaalada dadkana si bani’aadminimo ah inay uga soo qayb galaan waa lagu dhiiryay 31 qof oo aan aniga ka mid ahay ayaan ku tagnay. Markii tacsida dhamaatay ayaan Mudanaha u dhowaaday oo uga mahadceliyay ka soo qayb galkiisa balse aan u sheegay in Africa ay joogaan dad dadka qadariya oo weliba aan xasuuqin fikradiisa iyo hadalkiisaba qaldanaayeen iyo weliba tacsida korkeeda inuu Afrika dadka adduunka kala dhexbaxay (takooray). Inkastoo ay markaasi dadkii kala tageen oo warkaasi la tageen haddana wuu iraali geliyay qirtayna in hadalkaasi uusan munaasin ahayn.
Qaladaadka ay ku kacayaan qaar ka mid ah Madaxda Afrika iyo Hogaamiyeyaasha kooxahaba ma aha mid la difaaci karo. In la yiraahdo madaxda Afrika cunta siiya haddii kale ayagaa cunto iska dhiganayaan ama dadka reer Afrika annagaa ka fiican oo bani’aadamnimada ma qadariyaan Yaa sababay?